Faahfaahinta Farsamo ee Nidaamka Tareenka Fudud | RayHaber | raillynews
HomeDUNIDANooca farsamada ee Nidaamka Tareenka
04 / 10 / 2012 DUNIDA, tareenka, GUUD, Nidaamka Tareenka fudud (HRS), Headline, TURKEY
Nidaamka Tareenka fudud wuxuu caan ku yahay nidaamka gaadiidka dadweynaha ee tareenka. Iyada oo awooddeeda sarreysa, gawaarida aamusnaanta, tayada sare ee wadista iyo jidadka loo qoondeeyey, waxay noqotay xubin muhiim ah oo ka mid ah qoyskii gaadiidka ee afartii sano ee la soo dhaafay. Nidaamka Tareenka fudud wuxuu ahaa qaabka ugu dhaqsaha badan ee gaadiidka ee dalal badan.
Nidaamka Tareenka fudud;
Tareenka tareenka badanaa waa caadi 1435 mm.
Tamarta, 3. dhejinta ama qaadashada caleenta.
Tamarta uu isticmaalo waa xawaaraha 750 DC ama 1500 AC.
Waxaa maamula darawal.
Waxaa lagu xakameynayaa iyada oo la raacayo nidaamka calaamadaha.
Qaar ka mid ah nidaamyada tareenka fudud leh oo lagu qalabeeysanayo tiknoolajiyad casri ah, koontaroolka oo dhan ayaa lagu samayn karaa nidaamka signalka.
60-80 waxay ku safreysaa xawaare isku celcelis ah km / saac saacaddii. 62 Masaafada u dhaxaysa laba saldhig waa caadi ahaan 600-1200.
Gaadiid kastaa wuxuu leeyahay awood ku dhawaad ​​rakaabka 300.
Waxaa lagu shaqeeyaa khadadka gaarka ah. Qadka gaarka ahi waa caadi ahaan heer heer ah.
Marka loo eego xaaladda jireed ee dhulka; dhuumo furan, kala-soocid, viaducts ama tunnel gaaban ayaa la dhisi karaa.
Nidaamka Tareenka fudud wuxuu u shaqeeyaa jirka iyadoo la raacayo jihada wadada. Si kale haddii loo dhigo, nidaamka tareenku wuxuu raacayaa jidka. Taas macnaheedu waa: Nidaamka tareenka, darawalku wuxuu xakameynayaa xawaaraha baabuurka. Nidaamka wuxuu ku xiran yahay shabakada tareenka.
Tiknoolojiga tareenku wuxuu ka kooban yahay gawaarida birta iyo birta birta ah. Mid kasta oo giraangir ah wuxuu la xiriiraa daaqadaha hal dhibic.
Dabeecada xoogga wadida waxay ka kooban tahay tamar koronto.
Waxay isticmaashaa tamar nadiif ah, waa deegaan.
Haddii qaabdhismeedka juqraafigu uu lagama maarmaan yahay, wuxuu daawan karaa tunnel. Haddii qaybta dhexe ee waddada loo qoondeeyey, waxay ka gudbi kartaa waddada.
Waxaa lagu dhisi karaa heer sare ama hooseeya.
Diyaar garawe ah ayaa loo qoondeeyn karaa.
Khad toos ah ayaa loo qoondeeyn karaa waddo kala duwan (jid furan).
Nidaamka Tareenka fudud wuxuu yahay habka tiknoolajiyada ugu haboon ee loo maro nidaamka tareenka.
Waxaa laga soo xigtey: Hay'adda Fikradda iyo Istaraatijiyadda
Noocyada Qalabka Faaqidaadda Cilada
Noocyada Nidaamka Tareenka Magaalooyinka
Qorshaha Master Plan Erzurum